५८-वटा निजी कम्पनीका मजदुर र एसपीवाईएफ एकै ठाउँ - खबरम्यागजिन
Homeखबर५८-वटा निजी कम्पनीका मजदुर र एसपीवाईएफ एकै ठाउँ
May 2, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर, मुख्य समाचार, सिक्किम 0
सिङ्ताम,2मई
सिङ्ताम पूर्व सिक्किम स्थित नेपाली धर्मशालामा राज्यका निजी कम्पनीका मजदुरवर्ग साथै सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमले संयुक्त रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस पालन गरेको छ।
कम्पनीका मजदुरवर्ग द्वारा “सङ्घर्ष हो जीवन, जीवन सङ्घर्ष हो” नामक गीतबाट शुरु भएको कार्यक्रम एसपीवाईएफ-का सदस्य शङ्कर शर्माले सञ्चालन गरेका थिए। अतिथिका रुपमा वरिष्ठ साहित्यकार बिजयकुमार सुब्बा, वरिष्ठ कानुनविद् डा डोमा टी. भुटिया र कलकत्ताबाट वरिष्ठ ट्रेड युनियनिस्ट समर सिन्हा उपस्थित थिए। राज्यका लगभग ५८-वटा निजी कम्पनीका मजदुरवर्ग आफैले पहल गरेर मजदुरवर्गको हक र हितको चर्चा गर्दै यसरी भव्यरुपमा मई दिवस पालन भएको राज्यको इतिहासमा प्रथमपटक हो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै साहित्यकार विजय कुमार सुब्बाले दुईवर्गमा विभाजित समाजमा तल्लोवर्गमा पर्ने मजदुरवर्ग एक हुनुपर्ने समयको माग रहेको बताए भने मजदुरले मालिकलाई करोडपति बनाउन सक्छ भने उसलाई सडकमा ल्यउन सक्ने बताए। एसपीवाईएफ र राज्यको मजदुरवर्गले यसपटक यसरी मई दिवस पालन गरेर राज्यमा नयाँ इतिहास कायम गरेको पनि उनलेे बताए साथै सम्पूर्ण श्रमजीवीवर्ग एक हुनुपर्ने उनलेे बताए।
वरिष्ठ कानुनविद् डा डोमा टी. भुटियाले सिक्किम राज्यमा मजदुरवर्गको पक्षमा के कस्तो कानुनहरू रहेको छ त्यसलाई चर्चा गर्दै ट्रेड युनियनको जरुरत बारे खुलस्त गरिन्। राज्यमा मजदुरको हितमा कानुनहरू एकदमै कम मात्रा रहेको बताउँदै अब मजदुरवर्ग एक भएर आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति संघर्ष गर्नुपर्ने पनि उनले बताइन्।
कलकत्ताबाट आएका ट्रेड युनियनिस्ट समर सिन्हाले केन्द्र सरकार राज्य सरकार साथै कम्युनिस्ट नामधारी सिपीआई (एम)- आदि राजनैतिक दलहरूसम्मले मजदुर विरोधी कदमहरू चलाइरहेको बताए। युनियन स्थापना गर्नु आवश्यक छ तर कुन चाहिँ सिद्धान्तको आधारमा गर्ने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको पनि उनले बताए।
कार्यक्रममा नरबहादुर घिमिरेले मजदुर सम्बन्धि चारवटा कविता प्रस्तुत गरेका थिए जसमा दुईवटा कविता अन्य कविहरूको रहेको थियो। यसरी नै शंकर शर्माले मई दिवसको इतिहासलाई चर्चा गरेका थिए भने सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमको तर्फबाट रुपेन कार्कीले सम्बोधन गरेका थिए। राज्यबाट मजदुर सङ्घर्षको थालनी आजबाट भएको बताएका थिए।
विभिन्न कम्पनीका मजदुरहरूले कम्पनी भित्र भइरहेको शोषण र अमानवीय वातावरणको खुलासा गर्दै सम्बोधन गरेका थिए भने “हामी जित्ने छौ एक दिन, गाउँ गाउँबाट उठ, सङ्घर्ष हो जीवन” आदि जनवादी गीतहरूको प्रस्तुति पनि गरेका थिए।
कार्यक्रमले सिक्किम राज्यमा ट्रेड युनियनको माग र वैज्ञानिक विचारधारामा आधारित ट्रेड युनियन निर्माणको निम्ति आजदेखि संघर्ष थालेको घोषणा गरेको थियो।